HTC ga-alaghachi ịrụ ọrụ na ahịa India n'oge na-adịghị anya | Gam akporosis
HTC na-akwadebe ọzọ ịrụ ọrụ n'otu n'ime ahịa kachasị asọmpi n'ụwa
O yiri ka anyị ga-enwe HTC maka ezigbo oge ọzọ. Ọ bụ ezie na ahịa ụlọ ọrụ ahụ ebilibeghị, mana dị nnọọ iche, ọchịchọ ị nwere igosipụta onwe gị pụtara ìhè. Ruo ogologo oge enwere mkparịta ụka banyere mmechi nke ọrụ ya na ahịa niile n'ụwa, mana ọ dị ka, maka ugbu a, njedebe a nke ụlọ ọrụ a na-atụ anya agaghị abịa n'oge dị mkpirikpi; Ndị Taiwanese ka nwere batrị ndị fọdụrụ iji nọgide na-anwa.
Ihe omuma ohuru nke batara na ihe ndi emeputa ya na India, ahịa nke o si na ya pụọ ​​n'afọ gara aga n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ala ọ na-enweta n'ahịa, nke na-enweghị ike ịkwado ya. Ugbu a, dị ka akụkọ ọhụrụ si kọwaa, HTC ga-eme ọzọ ọnụnọ na mba, iji hụ ma ihe ọ bụla dị mma karịa ka ọ dị na mbụ.
Ihe ekwuru na akụkọ ahụ ekwuputabeghị HTC ma ọ bụ gosi ya, kama ekwuru ya dika ihe di uku. Ọ na-akọ na smartphones ọhụrụ nke ika ahụ ga-abata na India n'ọnwa a. Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ dị ukwuu maka ụlọ ọrụ ahụ na, n'otu oge ahụ, na-atụghị anya ya; ezumike nká dị ka mkpebi na-enweghị atụ ma ghara ịlaghachi, mana anyị bụ ndị a.
Dị ka ọnụ ụzọ ahụ si dị 91Mobiles discloses, ụfọdụ akwụkwọ na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ ga-eresị ekwentị ya site na Inone, netwọkụ nkesa mba ụwa nke HTC nyere ikikere iji rụọ ọrụ na India.
HTC ịkwụsị ire igwe na China
Uzo ozo kwukwara banyere ya HTC iji malite usoro ọhụụ ọhụrụ na ụbọchị ndị na-abịanụ. A na-atụ anya ịnye ọtụtụ mbido na ụlọ ọrụ ama ama na ntinye ọhụụ ọhụụ n'ịntanetị, mana ihe ọhụụ ọ ga-enye bụ ihe anyị ga-achọpụta ma emechaa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » HTC na-akwadebe ọzọ ịrụ ọrụ n'otu n'ime ahịa kachasị asọmpi n'ụwa
Nzacha ohuru nke ntụgharị nke OPPO Find Z
A Xiaomi ka ekwenyela: ọ nwere ike ịbụ onye nwere chipset Helio G90T ma ọ bụ igwefoto 64 MP